Wasaaradda Amniga Ayaa Ku Dhawaaqday In La Banaanbixi Karo Maalinta Berrito Ah Ee Ku Beegan 13da Janaayo, Gugga 2022da – Great Banaadir
Dabra (Arabaco), 12-01-2022
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Amniga ee Dowladda Xilgaarsiinta Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana ku taariikhsanaa 10kii Bishan Janaayo ee Gugga 2022da ayaa lagu soo waramayaa in Qoraalkaasi lagu sheegay in Maalinta Berito oo ah Fabeeleyda (Khamiista), in Banaanbax lagu qaban karo Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib markii ay Golaha Bulshada Banaadir ay ka codsadeen Wasaaradda Amniga ee Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya.
Warka wuxuu ku darayaa in Wasaaradda Amniga ee Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya ay Balanqaad Dhanka Amniga ah ay u sameysay Banaanbaxayaasha Berrito isla markaana ay Hay’adaha Amniga ay sugayaan Amniga Banaanbaxayaasha Maalinta Berrito ah ee 13da Janaayo, Gugga 2022da.
Shalay ay aheyd markii uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho (Cumar Filish) uu go’aaminayay in Maalinta Fabeeleyda (Khamiista) ee 13da Janaayo, Gugga 2022da aanan la banaanbixi karin, uu-na uu ku wargelinayay Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Saraakiisha Amniga; waxaana Bulsho Weynta Gobolka Banaadir usii cadaatay in Cumar Filish uu diidanayaa in lagu banaanbaxo Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horayna sida dhow ula soo shaqeeyay Kelitaliyehii Soomaaliya Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Ha yeeshee Warkii Shalay kasoo yeeray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho (Cumar Filish), waxaa isla Shalay ka warceliyay Qaban-qaabiyayaasha Banaanbaxa Berito (13da Janaayo, 2022) oo sheegay in Banaanbaxa uu yahay Xaq Dastuuri ah.
Maanta waxaa Banaanbaxa Berito ee 13da Janaayo, 2022da, si rasmi ahaan u oggolaaday Wasaaradda Amniga ee Dowladda Xilgaarsiinta Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo u cuskaneyso Xuquuqda Dastuuriga ah oo ay Bulshada u leedahay in ay qabsan karaan Banaanbax Nabadeed sida ku cad Qodobka 20aad ee Dastuurka Ku-meelgaarka ah.
Ugu dambeysti, Wasaaradda Amniga Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya waxey Qaban-qaabiyayaasha Banaanbaxa Nabadeed ay kula dardaarantay in laga fogaado Rabshadaha isla markaana ay Banaanbaxayaasha la wada-shaqeeyaan Hay’adaha Amniga ee sugayo Amniga Banaanbaxayaasha, sida nabaddeysan u banaanbaxayo.